Nhau - Nei Kangyuan's Laryngeal Mask Airway?
Laryngeal mask airway (LMA) chigadzirwa chinoshanda chakagadzirwa pakati pema1980 uye chinoshandiswa mune yakawanda anesthesia kumisikidza yakachengeteka nzira yekufema. Laryngeal mask yemhepo ine yakanaka mhando ine zvakawanda zvakanaka, senge zviri nyore kushandisa, yakanyanya kubudirira mwero wekuisa, yakavimbika kufefetedza, zvishoma kukurudzira, kudzivirira kukuvara pahuro uye tracheal mucosa. Asi sei kusiyanisa mhando yeLMA? Nhasi, tora Kangyuan's laryngeal mask airway ine yakakwira musika mugove semuenzaniso kutsanangura maitiro ekutonga mhando ye laryngeal mask airway kubva pazasi matatu maficha.
Chekutanga: Zvinyorwa zveLaryngeal Mask Airway
Iyo chubhu inodhonzwa yeiyo yakachena solid silicone yakavharidzirwa neplatinamu, ndeyeyechiremba giredhi ine pachena kujekesa, kwakanakisa biocompatibility uye yakasimba kugadzikana. Iko kumeso kwakatsetseka uye hakuzowana yero zuva risati rapera. Kukombama kwehubhu kunoenderana nemamiriro emuviri wemunhu.
Iyo cuff inogadzirwa nejekiseni yekuumba muchina uye ine simba yekusanganisa pombi yeiyo yakachena mvura silicone zvinhu zvakasanganiswa neplatinamu, ine yakasimba kugadzikana, yakapfava uye inotsvedza pamusoro, inosununguka kusangana nevarwere.
Chepiri: Maitiro Ekugadzira
Kangyuan laryngeal mask yakave yakazvimiririra yakagadzirwa neboka reKangyuan muna 2005 uye yakaiswa mukugadzirwa mushure mekuedzwa kwakasimba. Iyo ine akati wandei patent uye ine isingaenzanisike mabhenefiti achienzaniswa nemamwe laryngeal mask. Iyo yekutanga maitiro ndeinotevera:
1) Silicone mbishi zvinhu zvinosanganisa: neakavhurika chaiyo siliconeraw zvinhu zvinosanganisa muchina kuona kunyange kusanganisa, uye shandisa frequency kutendeuka mvura chiller kudzora kutonhora tembiricha.
2) Kuwedzeredzwa kwechubhu: yakazara otomatiki chaiyo yekuwedzera extrusion michina ine laser dhayamita kuyerwa uye otomatiki yekucheka basa inogamuchirwa kuti ive nechokwadi chakaringana uye chinodzora saizi yeKangyuan laryngeal mask airway.
3) Cuff jekiseni kuumbwa: kushandisa epamba advanced zvizere otomatiki emvura silicone jekiseni kuumbwa muchina, zvine simba kusanganisa zvinhu pombi, microcomputer kudzora michina chiito uye parameter.
4) Cuff kubatanidza: izere otomatiki yekupa michina inoshandiswa kuona kuti iyo glue inoshandiswa zvakaenzana.
5) Tube yekudhinda: Kurapa kuomesa inki kunoshandiswa, kudhinda haina-chepfu uye haidonhe.
6) Batanidza iyo chubhu uye cuff uye kukwenya iyo glue: ita kubatana pakati pebhu uye cuff kumeso uye kuwandisa, pasina protrusion.
7) Unganidza cuff inoratidza.
8) Chitarisiko kuongorora: iyo LMA inofanira kuongororwa nemaoko.
9) Kuonekwa kwekukochekera kwecuff: kufemera kapuleti 1.3 nguva yekuyedzwa kwemvura kuti uone kana ichidonha.
10) Yakachena uye yakaoma.
Chetatu: Mhando dze laryngeal mask airway
Iyo chaiyo maitiro eiyo Kangyuan laryngeal mask inotarisisa hunyanzvi hwayo. Mushure memakore gumi nemashanu ekubhabhatidza musika uye kunaya, Kangyuan ane mukurumbira mukurumbira mumisika yeEuropean, America neSoutheast Asia. Uye zvakare, Kangyuan yakagadzira akati wandei emarara emasikisi zvigadzirwa zvine mhedzisiro yemhando dzakasiyana dzevarwere, senge imwe nzira yakajairwa laryngeal mask airway, imwe nzira yakasimbiswa laryngeal mask airway (iyo yekufema chubhu inogona kutenderera pamakona mazhinji isina kupwanya kana kinking) , laryngeal mask airway ine epiglottis mabara (kudzivirira chero rudzi rwe Reflux), nzira mbiri dzakasimbiswa laryngeal mask airway, PVC laryngeal mask airway, nezvimwe.
Post nguva: Dec-09-2020